काेराेनाले एकै दिन मर्नेकाे सङ्ख्यामा नयाँ रेकर्ड - News 88 Post
May 19, 2021 May 19, 2021 N88LeaveaComment on काेराेनाले एकै दिन मर्नेकाे सङ्ख्यामा नयाँ रेकर्ड
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ८१७३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन् । यस्तै ७ हजार ९८९ जना पछिल्लाे २४ घण्टामा संक्रमणमुक्त भएको पनि गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २४६ को मृत्यु भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कोभिड–१९ बाट जनताको जीवन गर्नको लागि पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अन्तरगत माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष तथा संयोजकहरूको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले स्वास्थ्यकर्मीसहितको स्वयमसेवक टिम बनाएर वडा वडामा परिचालन गर्न निर्देशन दिए । उक्त टिमलाई टोल टोल पुगेर सङ्क्रमितहरुको उपचार गर्ने, उनीहरुको मनोबल बढाउने र जनचेतना फैलाउने कार्यमा अहोरात्र खटाउन जिल्ला नेताहरुलाई निर्देशन दिए ।
“जनताको जीवन रक्षा नै यतिबेलाको मुख्य काम हो, अरु सबै कुरा थाँती राखेर कोभिड–१९ विरुद्ध पार्टीको शक्ति लगाउनुस् ।” बैठकमा प्रभाकरले भनेको प्रदेश अर्थमन्त्री एवं रुकुम जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्माले जानकारी दिए । साथै नेता प्रभाकरले प्रदेशको नयाँ बजेट कोभिड–१९ बाट जनतालाई जोगाउने खालका योजनामा केन्द्रित गर्न समेत आग्रह गरे ।
यसैबीच हाल प्रदेश मातहतमा रहेको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताललाई संघ अन्तरगत राख्ने तयारी गरिएको भए त्यो गलत हुने नेता प्रभाकरले बताए । संघीय सरकारले अस्पताललाई सहयोग गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि प्रदेशको अधिकार खोसेर संघ मातहतमा ल्याउन कदापि उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो ।
प्रदेश संयोजक मायाप्रसाद शर्माले सहजीकरण गरेको भर्चुअल बैठकमा रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष एवं प्रदेश अर्थमन्त्री गोपाल शर्मा, जाजरकोट अध्यक्ष ढकवीर राना, जुम्ला अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवर, कालिकोट अध्यक्ष धनजित शाही र हुम्ला अध्यक्ष लालकेश जैसीले जिल्लाको परिस्थिति बारे रिपोर्टिङ्ग गरेका थिए ।
यस्तै सुर्खेतका संयोजक कृष्ण जिसी, सल्यान संयोजक कर्णबहादुर बुढाथोकी, दैलेख संयोजक प्रेम कटुवाल र डोल्पा संयोजक माल बहादुर रोकायाले विभिन्न सुझावसहितको रिपोर्ट पेश गरेका थिए ।
रबि लामिछानेको टेलिभिजनको गाडी देखि ट्राफिक हैरान, कागजात हेर्दा भए तिरिमिरी !
फेरि ठूलै घोटालामा मुछिए इश्वर पोख्रेल: छोरालाई भेन्टिलेटरको ठेक्का, वीर अस्पतालमा कन्तबिजोग
मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्यो, माधव पक्षलाई यति धेरै मन्त्रालय ! कुन-कुन ?
August 26, 2021 N88
काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक महिना निषेधाज्ञाको तयारी
संसद विघटनविरुद्ध विद्यार्थी संगठनद्वारा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक
May 22, 2021 N88